နင်.. တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး ဆိုတာ တကယ်လား? – Grab Love Story
နင်.. တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး ဆိုတာ တကယ်လား?
ဒေါ်လေး မမြခိုင်ထူးသာ ရဲ့ လိင်ကိစ္စ လက်တွေ့ အတွေ့ အကြုံက စောသည်ပဲ ခေါ်ရမလား ထူးသာ ကိုးတန်း လောက်မှာ စသည်၊ ထူးသာက ၈တန်း လောက်မှာ စပြီး ဂွင်းတိုက် တတ်နေပြီ၊ သူတို့ အတန်းထဲ က ကောင်မလေး တွေ ထဲ မှာ သူတို့ ထက် နည်းနည်း ကြီးသည့် ကောင်မလေး တွေ ရဲ့ ထမိန်တိုတို ဝတ်လို့ ပေါ်တဲ့ ခြေသလုံးသား တွေကို ကြည့်ပြီး သူ့ စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတတ်သည်၊ သူ့ ငယ်ပါကလည်း မာနေပြီး အမြဲ သေးပေါက် ချင်သလိုလို ဖြစ်နေတတ်သည်၊ ဘာလို့ မှန်း မသိ၊ အိပ်ယာထဲ ရောက်ရင်လည်း သူ့ ငယ်ပါလေးကို ကိုင်နေမိတတ်သည်၊နောက် သူက စာအုပ်တွေ လည်း အများကြီး ဖတ်နေပြီ၊ စာအုပ် အထူကြီးတွေကို ဖတ်ရ မှာ မပျင်း၊ မဟာ တို့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတို့၊ အရှေ့က နေဝန်းထွက်သည့် ပမာတို့၊ အထူးသဖြင့် ဟိုကိစ္စ တွေ ဒီကိစ္စ တွေ ပါလာ ရင် သူ့ငယ်ပါလေး ကို ဖိပွတ် မိတတ်သည်၊ တနေ့တော့ သူ့ အတန်းဖေါ် အိမ်ချင်းကပ်ရက်က ကျော်လှ တယောက် စာအုပ်နွမ်းနွမ်းလေး တအုပ် ယူလာသည်၊ စာအုပ် နာမည်က မောင်မောင်ကိုးတဲ့၊ အဲဒါ သူ့ ပထမဦးဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ ဗမာအောစာအုပ် ဖြစ်လေသည်၊ စာအုပ်ဖတ်ရင်း သူ့ငယ်ပါ ယားလာ၍ အတင်း ဖိပွတ်လိုက်ရာ သူ့
တကိုယ်လုံး အကြောဆွဲ သလို တထွန့်ထွန့် ဖြစ်သွားပြီး ငယ်ပါ လေး မှ လည်း အရည်တွေ ပုဆိုးထဲ ကို တဖြွတ်ဖြွတ် ပန်းထွက်ကုန်၏၊ ပထမတော့ သူလန့်သွား၏၊ သူ့ ကိုယ်သူ မထိန်းနိူင်တော့ ဘဲ သေးပေါက်ချလိုက် မိသည်ဟု သူထင်သွား၏၊ နောက်တော့ ကျော်လှ နှင့် ပြောမိ ဆိုမိ တော့ မှ သဘောပေါက် သွား၏၊အဲဒီက စပြီး ဂွင်းတိုက် တတ်လာ၏၊
အစပိုင်း က ဂွင်းတိုက် ဖို့ ကိုဘာမှ သိပ်စဉ်း စား စရာ မလို၊ အတန်းထဲ မှ ကောင်မေ်၊ လး တွေ ခြေသလုံးပေါ်တာတွေ၊ ရင်အုံလေး တွေ ဖေါင်းနေတာ တွေ၊ စဉ်းစား လိုက်တာနဲ့ ပြီးသည်၊ နောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်း ကြာလာသည်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ၊ နောက် အရွယ်ရောက်ပြီး မိန်းမတွေ၏ တောင့်တင်း ဖွံ့ထွားလှသော ကိုယ်ခန္ဓာ အဖုအထစ် တွေကို မှန်းသည်၊ နောက် နိူင်ငံခြားက မိန်းမ ကိုယ်လုံးတီး ပုံ ပါသည့် စာအုပ်တွေ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း တွေ ဆီက ငှားကြည့်ပြီး ဂွင်းထုတတ်လာသည်။ဒေါ်မြခိုင် ထူးသာ ရဲ့.ဒေါ်လေး တနေ့ တော့ ရုံးပိတ်ကျောင်းပိတ်ရက်နေ့လည်၊ထူးသာ လည်း အိမ်ကို ရောက်လာတဲ့ အချိန် ဆိုတော့၊ မမြခိုင် မြူဆွယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ထုံးစံ အတိုင်း နယ်မြို့လေး ရဲ့ နေ့လည် နေ့ခင်းက ခြောက်ကပ် တိတ်ဆိပ် လို့ ပျင်းစရာကောင်းကကောင်း၊ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ထူးသာက ကျော်လှ ငှားထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ကောက်လှန်ဖတ်နေတယ်၊ မမြခိုင် က ထူးသာ ရှေ့ နားမှာ ထိုင် ပြီး စာအုပ်တအုပ်ဖတ်နေတယ်၊ နောက် မမြခိုင်က ခြေထောက်တဖက်ကို ခုံပေါ်တင်ပြီး ထမိန်အောက်စ ကို မသိမသာ လွတ်ထားလိုက်တယ်၊ စာအုပ် ဖတ်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး တချိန်လုံး မမြခိုင်ကိုချောင်းနေတဲ့ ထူးသာ မျက်လုံး ပြူးသွားတယ်၊ ဝင်းနေတဲ့ ပေါင် အတွင်းသား တွေကို တွေ့လိုက်ရတာကိုး၊ ထူးသာ ဟန် မဆောင် နိူင်တော့ စာအုပ်ပေါ်ကြည့်တာကနည်းနည်း မမြခိုင် အောက်စလွတ် နေတာကို ကြည့်တာက များများ ဖြစ်နေ ရသည်၊ မမြခိုင် က တွေး သည် ဒီကောင်လေးဘာမှ လုပ်ဖူးပုံလည်း မရ ဘူး သူ စတာ စောင့်နေလို့တော့ မရဘူး ဒီလို လွတ်လွတ် လတ်လတ် ကြုံရဖို့ကလည်း တခါတလေမှ ရတာ၊ ငါပဲ အရင် လှုပ်ရှားမှ ရ မှာပဲ လို့ တွေးလိုက်သည်။
….ဟဲ့ ထူးသာ ဘာကြည့် နေတာလဲ……ဟို..ဘာဘာ..မှ မကြည့်ပါဘူး..ဒေါ်လေး ရဲ့……..အောင် မယ် ငါ မသိဘူး များ မှတ်နေလား..နင် ငါ့ ပေါင်တွေကို ကြည့်နေတာ မဟုတ်လား……အမှတ် တမဲ့ မို့ ပါ ဒေါ်လေး ရယ်..တမင် ချောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး……နင် မိန်းမ တွေကို ကိုယ်လုံးတီး မမြင် ဖူးဘူးလား…….ဟာ..ဒေါ်လေး ကလည်း ဘာတွေ ရှောက်ပြောနေတာလည်း…..ငါ အကောင်းမေးနေတာ…ငါမေးတာ ဖြေစမ်းပါ..ထူးသာ က မမြခိုင်မျက်နှာ အနေ အထားက စိတ်ဆိုးတဲ့ ပုံလည်း မပြ တော့ ၊ သူတို့ ယောက်ကျားလေး ချင်း ပြောလေ့ရှိသော၊ ဒီကောင်မ ကြီးထန်နေပြီ ဆိုတဲ့ စကားလို၊ များ မမြခိုင် တယောက် နှာထ နေပြီ လို့တွေးလိုက်မိသည်၊ သို့ သော်လည်း အတွေ့ အကြုံ မရှိသူ မို့ ဘာမှ မလုပ်ရဲ ၊ မမြခိုင် လွှတ်ပေးထားသော ထမိန်စ အောက်က ပေါင်တွင်းသား တွေကို ပဲ ကြည့် ရင်း တံတွေး တွေ မြိုချရင်းက၊…တခါမှ မမြင်ဘူး သေးပါဘူး ဒေါ်လေးရဲ့…….ဒါဆို နင်ဘယ်သူ့ မှ မပြောပါဘူးလို့ ဂတိပေးရင် ငါပြမယ်…..တကယ်လား ဒေါ်လေး ..ကျနော် ဂတိပေးပါတယ်၊ ကျိန်ဆိုလည်း ကျိန်ပါ့မယ်…..အင်း ဒါဆိုလာ ငါ့အခန်းထဲ ကို…ထူးသာတယောက် ဘယ်လို အခန်းထဲ ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါ၊ သူမှတ်မိ သလောက်ကတော့ မမြခိုင် တယောက် ထမိန်ရင်လျှားနဲ့ ကုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်လှဲ နေရာက သူက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လို့၊ မမြခိုင် ရဲ့ ဖြေချလိုက်တဲ့ ထမိန်အောက် က ဖေါင်းကြွ နေတဲ့ နိူ့လုံးကြီးတွေ၊ နို့သီးခေါင်း ညိုညို တုတ်တုတ် ကြီးတွေ၊ ထူးသာ တယောက် မြင်တာနဲ့ ပင် လုံချည်ထဲ သုတ်က ထွက်ချင် သွားသည်။ မမြခိုင်က နင်ကိုင်ချင် ကိုင်ကြည့်လေ ဆိုတော့ ထူးသာ တယောက် အငမ်းမရ နိူ့ကြီး နှစ်လုံးကို သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆုပ်နှယ်ပြီး အားရပါးရကိုင်၊ နောက်တော့ နို့ကြီးတွေကို ကုန်းစုပ်တော့တာပေါ့၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မမြခိုင်ရဲ့ လက် က ထူးသာလုံချည်ပေါ်ကနေပဲ ထူးသာရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးကို ဆုပ်ကိုင် ပြီးတချက်နှစ်ချက် ဆောင့်လိုက်တာ၊ ထူးသာ ခမျာ တွန့်ကနဲ တွန့် ကနဲ နဲ့ သုတ်ရည်တွေ လုံချည်ထဲ ပန်းထည့်ပြီး ပြီးသွား တော့ တာပါပဲ။ထူးသာ ခမျာ၊ သူ့လီးကြီး ပျော့သွားတော့ စိတ်ပျက် သွားတယ်၊ မမြခိုင် များ စိတ်ဆိုးသွားမလားပေါ့၊ မမြခိုင်က မျှော်လင်ပြီးသားပဲ၊ ဘာမှ မပြောဘူး၊ ထူးသာကို သူ့ နိူ့တွေ ဆက်စို့ ခိုင်းတယ် နောက်တော့၊ သူ့ ထမိန်ကို လည်း ကန်ထုတ် ပြီး ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ထူးသာတယောက် သူချောင်းချောင်းပြီး ခိုးကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ ပေါင်လုံး ကြီးတွေ ဖွေးကနဲ ပေါ်လာပြီး ပေါင်ခွဆုံ က အမွေးနက်နက် တွေ ဖုံးနေတဲ့ အဖုတ်ကြီး ကို တွေ့လိုက်ရတော့၊ လီးက ချက်ခြင်း ပြန်မာတက်လာခဲ့ရပါတယ်၊ မမြခိုင်က ထူးသာရဲ့ လက် ကို ဆွဲယူပြီး သူ့ အဖုတ်ပေါ်တင်ပေး လိုက်တော့ ထူးသာ လက်တွေက ဘာရယ်မသိ အမွှေးတွေကို ဖွရင်း စိုစွတ်နေတဲ့ အဖုတ် ဝ ကို သွားနိူက်မိ တယ်၊ ထူးသာက သူ့လက်ချောင်းထိပ်ကလေး တွေနဲ့ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေး တွေကို လျှောက်ပွတ် ပေးနေတော့ မမြခိုင် မျက်လုံးလေး တွေ မှေးပြီး ပါးစပ်က ငြီးသံလေး တွေ ထွက်လာတယ်၊ နောက်တော့ ထူးသာ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို လိမ့်တက် ခိုင်းလိုက်တယ်၊ မမြခိုင်က သူ့ပေါင်ကြီး နှစ်လုံးကို ကားလို့၊ သူ့ပေါင် နှစ်လုံးကြား မှောက်ရက် ဖြစ်နေတဲ့ ထူးသာရဲ့ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ့ အဖုတ်ဝ မှာတေ့ပေးလိုက်တယ်၊ ထူးသာလည်း သူ့ဖင်ကိုကော့ပြီးတော့ ထိုးထည့်လိုက်တာ သူ့လီးကြီးက စိုစိုစွတ်စွတ် နဲ့ အတွင်းထဲ မှာ နွေးနေတဲ့ အဖုတ်ထဲကို ဖြေးဖြေး ချင်း ဝင်သွားခဲ့တယ်၊ မမြခိုင် က ကလေး တယောက် အမေ ဖြစ်တာရယ်၊ အရမ်းကိုစိတ်ထ နေပြီ မို့ ရွဲနေတဲ့ အရည်တွေ ရယ်ကြောင့် ထူးသာ လီးကြီးက လျောလျောရူရူ ဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့၊ထူးသာ လီးကြီးက တကယ်တော့ လူကြီး စံချိန်မှီနေပါပြီ၊ မမြခိုင် အဖို့ကလည်း နှာအတင်းထ နေတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ သူ့ အဖုတ်နံရံတလျှောက် ထိုးဝင်လာတဲ့ ထူးသာ ဒစ်ကြီးက သူ့ တကိုယ်လုံးကို ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထလာအောင် ကောင်းသွားရပါတယ်၊ နောက်တော့ သဘာဝ အလျှောက် အလိုလို ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောအတိုင်း ထူးသာက အပေါ်က ဖိဖိ ဆောင့်တာကို မမြခိုင်တယောက် အောက်က ကော့ကာကော့ကာ နဲ့ အတိုင် အဖေါက် ညီညီ လိုးပွဲ စပါတော့တယ်၊ ထူးသာ အဖို့ ပထမ တချီ လုံချည်ထဲ မှာ ထွက်သွားရလို့ ဒီတခေါက်က တော့ တော်တော်ကြာကြာလေး ကို ဆွဲ နိူင်ခဲ့ပါတယ်၊ မမြခိုင်ရဲ့ ကုတင် တိုင်တွေ တောင် လှုပ်ခါရမ်းနေရအောင် အားပါပါ နဲ့ ဆောင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်၊ ထူးသာပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်တွေ သူ့ စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထည့်လိုက်တာ နဲ့ မမြခိုင်လည်း ကာမ စည်းဇိမ် အထွတ်ထိတ် ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်၊ သူတို့ နှစ်ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်ကာ နားနေရင်း မမြခိုင်က ထူးသာရဲ့ နဖူးပြင်ကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်ပြီး၊..ထူးသာ ..သား …ဒေါ်လေး နဲ့ ဒီလို နေတာ ဘယ်သူ မှ ရှောက် မပြောရဘူးနော်….
.ဟာဒေါ်လေးကလည်း ကျနော် ဒီလောက်တော့ မအ ပါဘူးဗျာ…….နင်..မိန်းမ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး ဆိုတာ ရော တကယ်လား……ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်လေးရ ဒါ ပထမဆုံး အခါပဲ ကျနော် လုပ်ဖူးတာ…..အမလေး ပထမ ဆုံး အခါမို့ ပဲ လုပ်များသာ လုပ်ဖူးရင် ငါတော့ တော်တော် ခံရမှာပဲ အဟင့်…ညှတုတု အမူအရာလေးနဲ့ သူ့ကို ပိုပိုသာသာလေး မြှောက်ပြောလိုက်တဲ့ မမြခိုင်ကြောင့် လူပျိုရိုင်း ထူးသာ ရဲ့ လီးကြီး က ဒေါင်ကနဲ ပြန်မာ လာရပါတော့တယ်၊
ရှစ်မိုင် က အင်ဂျင်နီယာမမ